Haddii aad rabto inaad dhisto xirfadahaaga qorista qoraalka, maqaalkani wuxuu ka kooban yahay faahfaahinta koorsooyinka bilaashka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah loogu talagalay qorista waxyaabaha ku jira internetka. Qoraalka nuxurku wuxuu u dhacaa inuu yahay mid ka mid ah aasaaska ugu wax ku oolka badan ee suuqgeynta tan iyo markii ay soo ifbaxday warbaahinta cusub.
Tirakoobyadu waxay muujinayaan in dadka badankood ay jecel yihiin qoraalka. Tani waxay noqon kartaa sababta ay u yiraahdaan "content is king". Qof kastaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay qoraa, hase yeeshe, qof kastaa maaha qoraa wanaagsan. Qorayaasha qoraalka wanaagsan waxay abuuraan maqaallo tayo leh oo ka xor ah xatooyo.
Intaa waxaa dheer, tiknoolajiyada cusub iyo isbeddellada ayaa soo socda markasta iyo qoraa wanaagsan oo qoraal ah, waxaad u baahan tahay inaad la socoto isbeddellada. Kama socon kartid isbeddellada cusub haddii aadan helin xirfadaha uu suuqa u baahan yahay. Tani waa sababta aan u soo uruurinay koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee loogu talagalay qorista waxyaabaha adiga kugu habboon qodobkan.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee maqaalka ayaa ku jira jaantuska waxyaabaha hoose. Waad eegi kartaa.
1 Waa maxay Qoritaanka Mawduucu?
2 Sideen ku baran karaa qoritaanka guriga?
2.1 1. Dooro niche
2.2 2. Abuur degel ama blog
2.3 3. Qor shaqo muunad ah
2.4 4. Meel walba iska dhig
2.5 5. Hubi qorida looxyada shaqada
2.6 6. Ka ururi markhaatiyada macaamiishaada
3 Immisa ayaan ku kasban karaa qoraa ahaan?
4 Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee qoraalka qoraalka
4.1 1. Aasaaska Suuqgeynta Dijital ah ee Google
4.2 2. Noqo Blogger Kafiican Skillshare
4.3 3. Shahaadada Qorista Mawduuca ee Hubspot
4.4 4. Tababarka SEO ee Udemy
4.5 5. U qorista websaydhka Open2Study
4.6 6. Suuqgeynta Mawduuca - Koorsada Shahaadada ee Jaamacadda California (Coursera)
4.7 7. Qoraalka Ninja: Afarta Heer ee Qorista Maskaxda (Udemy)
4.8 8. Qalabka Qorista & Kharibaadaha: Qoraalka / Qoraalka / Qoraalka Mawduuca (Udemy)
4.9 9. Istaraatiijiyadda Mawduuca Xirfadlayaasha Takhasuska ee Jaamacadda Woqooyi-Galbeed (Coursera)
4.10 10. Macluumaadka Suuqgeynta Maskaxda: Abuur Mawduuc iibiya (Udemy)
4.11 11. Sifaynta qoraalka - Sida loo qoro nuqul iibiya (Udemy)
4.12 12. Koorsooyinka Suuq-geynta Bilaashka ah ee Khadka Tooska ah (Barashada LinkedIn)
Waa maxay Qoritaanka Mawduucu?
Qoraalka nuxurku waa nooc ka mid ah qoritaanka khadka tooska ah ee internetka oo ku lug leh qorshaynta, qorista, iyo tafatirka nuxurka mareegaha, ugu horreyntii ujeedooyinka suuq geynta dijitaalka ah. Si kale haddii loo dhigo, waxay ku lug leedahay sameynta maqaallo ka muuqda websaydhada sida caadiga ah iibinta ama dhiirrigelinta badeecad gaar ah.
Macaamiisha waxay siiyaan qorayaasha nuxurka leh shaxanka ay ku shaqeeyaan. Shaxda uu macmiilku bixinayo waxay sharraxaysaa hawsha iyo wixii shuruudo ah ee SEO ah oo ay ku jiraan ereyga muhiimka ah iyo eraybixinta la xidhiidha.
Waajibaadka qoraaga nuxurka leh ayaa ah inuu abuuro maqaal kalifaya oo bartilmaameed ka dhigan doona degel iyadoo la adeegsanayo dulucda. Qoraalka nuxurku waa ka duwan yahay saxaafadda ama qoraal-dhaqameed dhaqameed. Tani waa sababta oo ah qoraalka qoraalka ayaa loo sameeyay si saameyn loogu yeesho bogga.
Dhinaca kale, qorista nuxurku waxay xiriir dhow la leedahay Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO). Qoraalka nuxurka ah, waa inaad ku qortaa maqaallo si taxaddar leh diirada u saaran oo ka koobnaan doona keywords keywords ay akhristayaasha khadka tooska ahi ka raadiyaan.
Haddii aad rabto inaad qoro nuxur tayo sare leh, waxaad hubin doontaa in ereyada muhiimka ahi ka muuqdaan cufnaanta saxda ah. Intaa waxaa sii dheer, qoraalladu waxay noqon doonaan kuwo aan la khaldin, oo cad, oo looga dan leeyahay kor u qaadista alaabta. Si kastaba ha noqotee, nuxurka qoraalka ee liidata kuma sarrayn doono matoorada raadinta.
Sideen ku baran karaa qoritaanka guriga?
Haddii aad jeceshahay wax qorista oo aad in muddo ahba qabanaysay, waxaad sidoo kale baran kartaa sida wax looga qoro khadka tooska ah ee gurigaaga. Uma baahnid shahaado wax alla wixii aad ku bilaabi karto qorista. Si kastaba ha noqotee, helitaanka shahaadada qoraalka qoraalka waxay kaa caawin doontaa inaad kor u qaaddo dib-u-dhiskaaga isla markaana ay kordhiso fursadahaaga inaad ku hesho shaqo mushahar leh oo duurka ku jira.
Hoos waxaa ku yaal tillaabooyinka ay tahay inaad qaadatid si aad ugu baratid qorista waxyaabaha ku jira gurigaaga:
1. Dooro niche
Tallaabada ugu horreysa ee qoraalka nuxurkiisu yahay adiga oo dooranaya aag aad jeceshahay ka dibna ku dul qor. Markaad doorato niche aad jeceshahay, dhib kuguma noqon doontid inaad sameyso wax cilmi baaris ah oo ku saabsan mowduucyada aad wax ku qori karto.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha aad ka dooran karto:
Jimicsi iyo cunto
Waxbarasho iyo fursado
Caafimaadka iyo samaqabka
Qoyska, xiriirka, iyo waalidnimada
Yoga iyo fikirka
Karinta iyo nafaqada
Hogaaminta iyo shaqooyinka
Farshaxanimo, tolid, ama hiwaayado kale oo hal abuur leh
2. Abuur degel ama blog
Ka dib markii aad dooratay niche, waxa xiga ee la sameeyo waa in la abuuro degel ama blog si aad u bilaabi karto qorista si aad u hesho joogitaanka khadka tooska ah.
Haddii aad rabto inaad hesho baloog bilaash ah oo aad wax ku qorto, hubi WordPress or Wix, ama Dhexdhexaad. Weli waxaad u sameyn kartaa degel aad adigu leedahay si aad uga hesho joogitaan ballaadhan oo khadka tooska ah ah, aad ku hesho macaamiil cusub, oo aad lacag ku kasbato.
3. Qor shaqo muunad ah
Abuur qoraallo ku saabsan sida loo qoro loona daabaco waxyaabaha ku jira boggaaga ama bartaada internetka. Markaad wax qorto oo aad ku daabacdo waxyaabaha ku jira degelkaaga ama balooggaaga, hubi inaad guushaada la wadaagto qoyskaaga iyo asxaabtaada si aad uga kasbato booqdayaasha bogga aad ugu beddelan karto macaamiisha soo noqonaysa.
4. Meel walba iska dhig
Hadda oo aad si fiican u bilowday qorista niche-gaaga, waxaad raadsan kartaa shaqo dheeraad ah meelo kale. Waxaa jira dhowr madal oo internetka ah halkaas oo macaamiisha ay ku daabacaan shaqooyinka kuwa madaxa bannaan. Waad ka hubin kartaa barnaamijyadan shaqooyinka. Waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto faylalkaaga sida qoraa kooban oo aad ku kasbato sumcad.
Intaa waxaa sii dheer, waad iska hubin kartaa shirkadaha iyo websaydhada u baahan adeegyada qorayaasha waxyaabaha ka kooban. Waa tan sida aad uga bixi karto tan:
Abuur qoraal gaaban oo sharraxaya waxaad qabato. Marna ma sheegi kartid cidda aad la xiriiri doonto wakhti kasta maalin kasta oo u baahan doonta qoraa.
La xiriir shirkadaha oo iskaa wax u qabso ugu qor boggooda internetka. Waxa kale oo aad ku deeqi kartaa inaad ku abuurto waxyaabo la kafaala qaaday oo ku saabsan alaabooyinkooda iyo adeegyadooda boggaaga.
Ku biir kooxaha isku xirka khadka tooska ah iyo shaqsi ahaanba si aad uga dhex sameysid xiriiro qorayaasha kale ee iskood u shaqeeya. Waa wax iska caadi ah shaqooyinka la heli karo in lala wadaago bulshooyinkaas
Ku dheji khadka tooska ah oo daabac joornaalada. La xiriir tifaftirayaashooda una sheeg qodobbada qaarkood ee aad jeceshahay inaad qorto.
Iska hubi meheradaha freelancing sida Fiverr, Dhallinta, iyo Freelancer.com si aad u hesho shaqooyinka qorista. Xullo shaqooyinka aad qaban karto si aad khibrad dheeraad ah uga hesho duurka
Akhriso oo faallo ka bixi baloogyada kale ee aad jeceshahay. Waxay kaa caawin doontaa inaad ogaato qorayaasha kale ee mawduucyada ah ee aad la wadaagi karto fikradaha xitaa waxay kugu xiri karaan macaamiisha mushahar fiican qaata
Hubso in xisaabaadkaaga 'LinkedIn' iyo xisaabaadka kale ee warbaahinta bulshada si habboon loo cusbooneysiiyey oo ay ku jiraan xiriiriyeyaasha shaqooyinkaada daabacan ee loo shaqeeyeyaashu arkaan
5. Hubi qorida looxyada shaqada
Markaad wax qoraysid oo aad horumarinaysid naftaada, waxaad iska hubin kartaa guddiyada shaqada ee takhasuska leh si aad u hesho macaamiil mushahar sare qaata. Waad hubin kartaa looxyada shaqada oo ay ka mid yihiin Qoraa, BloggingPro, Iyo Raadiyaha Qoraha
6. Ka ururi markhaatiyada macaamiishaada
Inta badan ee aad u qorto waxyaabo tayo sare leh macaamiisha, waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto sumcad. Markaad dhisto sumcadahaan, macaamiishaadu had iyo jeer waxay ku siin doonaan jawaab celin wanaagsan oo u adeegta markhaati ahaan. Waad weydiisan kartaa inay ku soo diraan ra'yigooda adoo adeegsanaya emayl ama adeegsan kara waxqabadka markhaatiga ee LinkedIn si aad uga tagto faallo. Intaa ka dib, waxaad ku daabacdaa markhaatiyo macmiil weyn boggaaga ama bartaada macaamiisha cusub si ay u arkaan.
Immisa ayaan ku kasban karaa qoraa ahaan?
Gudaha Mareykanka, celceliska mushaarka uu qoro nuxurka qoraha sanadkii wuxuu u dhexeeyaa $ 58,857 ilaa $ 69,847. Mushaharka aad ku kasban doonto qoraa ahaan wuxuu kuxiran yahay hadba waxbarashadaada, shahaadooyinkaaga, xirfadahaaga dheeriga ah, iyo tirada sano ee aad kusoo qaadatay xirfadan.
Iyadoo laga helayo khadka tooska ah, xogta magdhowga-dhabta ah ee ka badan degellada kale, Salary.com ayaa kaa caawinaysa inaad go'aamiso bartilmaameedkaaga mushaharka saxda ah.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee qoraalka qoraalka
Maxay yihiin koorsooyinka tooska ah ee bilaashka ah ee khadka tooska ah ee qoraalka?
Haddii aad rabto inaad kasbato xirfado qoraal ah oo dheeraad ah oo kaa caawin doona inaad abuurto waxyaabo tayo sare leh oo aan la soo dirin, koorsooyinka ugu sarreeya ee internetka ee ku saabsan qorista qoraallada hoose ayaa ah shay la hubo adiga. Waxaa ka mid ah:
Aasaaska Suuqgeynta Dijital ah ee Google
Noqo Blogger Kafiican Skillshare
Shahaadada Qorista Mawduuca ee Hubspot
Tababarka SEO ee Udemy
Qoritaanka Webka ee Open2Study
Suuqgeynta Mawduuca - Koorsada Shahaadada ee Jaamacadda California (Coursera)
Ninja Writing: Afarta Heer ee Qorista Maskaxda (Udemy)
Qalabka Qorista & Burburinta: Qoraalka / Qoraalka / Qoraalka Mawduuca (Udemy)
Istaraatiijiyadda Mawduuca ee Takhasuska Takhasuska ee Jaamacadda Northwest (Coursera)
Suuq-geynta Macluumaadka Masterclass: Abuur Mawduuc iibiya (Udemy)
Sirta qoraal-sameynta - Sida loo qoro nuqul iibiya (Udemy)
Koorsooyinka Suuq-geynta Bilaashka ah ee Khadka Tooska ah (Barashada LinkedIn)
1. Aasaaska Suuqgeynta Dijital ah ee Google
Koorsadan waxaa soo diyaariyey Google si loo baro aasaaska Suuqgeynta Dijital ah. Waxay ka kooban tahay 26 qaybood oo ay naqshadeeyeen tababarayaal khabiir ku ah Google. Module kastaa wuxuu leeyahay casharo casharadu waxay kakooban yihiin fiidiyowyo iyo qoraalo.
Markaad dhammeysato cashar kasta, waad qaadan doontaa oo aad dhaafi doontaa kedis kahor intaadan u gudbin casharka xiga. Waxa kale oo aad qori doontaa qiimayn markaad dhammaystirto moduleka kahor intaadan u gudbin qaybta xigta.
Marka aad dhamaysato koorsadan, waad qaadan doontaa oo aad ka gudbi doontaa qiimaynta ugu dambaysa kadib, waxaa lagu siin doonaa shahaado. Koorsada si guul leh ayaa kuu caawin doonta inaad fahanto suuqgeynta dhijitaalka ah. Aqoonta ayaa kaa caawin doonta inaad noqoto abuure ka fiican waxyaabaha.
Waxaa lagu aqoonsan yahay Xafiiska Xayeysiinta Isdhexgalka ee Yurub iyo Jaamacadda Furan.
2. Noqo Blogger Kafiican Skillshare
Tani koorso bilaash ah waxaa lagula talinayaa bloggers iyo saamaynta warbaahinta bulshada. Waxay ka kooban tahay laba iyo toban fiidyow oo mid kasta oo ka mid ah uu leeyahay 57 daqiiqo soconaya. Fiidiyowyadu waxay ku bari doonaan aasaaska aasaasiga ah ee sida loo noqdo xirfadle ku shaqeeya qorista qorista.
Dhanka kale, isticmaaleyaasha cusub ee madalku waxay helaan bilaash oo aan xad lahayn koorsadan bil kasta. Koorsada waxaa maamula Andrea Goulet (Aasaasaha & Agaasimaha Guud ee Corgibytes).
3. Shahaadada Qorista Mawduuca ee Hubspot
Koorsada Shahaadada Qorista Mawduuca ee Hubspot ayaa ku bari doonta isbeddellada ugu dambeeyay ee qorista nuxurka. Waxaad baran doontaa xeelado wax ku ool ah oo aad codsan karto si loogu beddelo martidaada bogga.
Intaa waxaa dheer, waxaad baran doontaa sida loo qorsheeyo, loo dhiirrigeliyo, loona isticmaalo falanqaynta si loola socdo waxyaabaha ku jira. Koorsadan bilaashka ah ee qorista nuxurka ayaa ku bari doonta wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato. Xitaa waxaad baran doontaa sida loo hubiyo lacag-siintaada taas oo kaa dhigeysa qof caan ah berrinka.
Markaad dhameysato koorsada, waxaad qaadan doontaa qiimeyn kahor intaadan helin shahaado.
4. Tababarka SEO ee Udemy
Udemy wuxuu ku bari doonaa sida loo qoro waxyaabaha ku qanciya iyo sidoo kale Mashiinka Raadinta (SEO). Qoraalka mawduuca wuxuu la macaamilaa SEO. SEO la'aan, nuxurku si fiican ugama dhex muuqan doono matoorada raadinta, sidaas darteed ma bartilmaameedsan doono akhristayaasha khadka tooska ah.
Tababarka SEO ee Udemy waa koorso bilaash ah. Eric Schwartzman ayaa maamula. Haddii aad rabto inaad xirfadahaaga qoraalka qoraalka u qaaddo heerka ku xiga, baro tababarka SEO ee Udemy.
5. U qorista websaydhka Open2Study
U qorida websaydhka Open2Study waa mid ka mid ah koorsooyinka bilaashka ah ee khadka tooska ah ee qorista waxyaabaha ku jira. Koorsada waxaa maamula Frankie Madden oo ah lataliye khibrad sare u leh khibradaha isticmaalaha ee Stamford Interactive.
Intaa waxaa dheer, koorsadan bilaashka ah ayaa kaa caawin doonta inaad noqoto qoraa wanaagsan iyo istiraatiijiyad wanaagsan. Koorsadu waxay sidoo kale ku bari doontaa isbeddellada ugu dambeeyay ee ku saabsan qorista maadooyinka si aad u abuurto waxyaabo tayo sare leh oo la xiriira oo aad dib u soo celin karto si aad u hesho martida bogga loo beddelo.
Waxaa lagu siin doonaa shahaado markii aad ku guuleysato koorsada.
6. Suuqgeynta Mawduuca - Koorsada Shahaadada ee Jaamacadda California (Coursera)
Koorsadan qorista maadadan waxaa bixiya UC Davis oo kaashanaysa Copyblogger. Koorsada waxaa bixiya Sonia Simone (Madaxa Sarkaalka Mawduuca ee Rainmaker Digital).
Waxaad baran doontaa sida loo kala qaybiyo dhagaystayaashaada iyo sida loo hirgeliyo qorshooyinkaaga suuq-geynta si aad ugu rogto martidaada hogaamiyeyaal.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee qoritaanka nuxurka waxay ka kooban tahay shaqooyin iyo kedisyo. Markaad ku guuleysato, waxaa lagu siin doonaa shahaado. Muddada koorsadan waa shan (5) toddobaad.
7. Qoraalka Ninja: Afarta Heer ee Qorista Maskaxda (Udemy)
Koorsadani waxay ku bari doontaa sida loo noqdo qoraa xirfadeed leh. Uma baahnid inaad khibrad u leedahay qorista nuxurka kahor intaadan qaadan koorsadan maxaa yeelay waxay ku bari doontaa aasaaska.
Qorista Ninja ayaa ku bari doonta dhammaan afarta heer sida sheeko, tuducyo, weedho, iyo ereyo. Intaas waxaa sii dheer, koorsadu waxay ku bari doontaa sida loo abuuro baloogyo iyo nuqullo suuqgeyn ah oo bartilmaameedsanaya macaamiisha. Koorsadu waxay ka kooban tahay in ka badan 50 muxaadaro iyo 11 agab la soo degsan kara oo aad marin ugu heli karto wakhti kasta.
Dhamaadka casharrada, waxaa laguu qori doonaa qiimeynno. Waxay kugu qaadan doontaa 4 saacadood oo keliya inaad dhammaystirto koorsada. Markaad dhammaystirto koorsadan, waxaad noqon doontaa aqoonyahan ku jira qorista nuxurka.
8. Qalabka Qorista & Kharibaadaha: Qoraalka / Qoraalka / Qoraalka Mawduuca (Udemy)
Koorsadani waxay ku tusi doontaa aaladaha ugu wanaagsan ee aad u isticmaali karto si aad u abuurto waxyaabo aan khafiif ahayn oo qalad khafiif ah. Waxaad sidoo kale baran doontaa hacks-ka kaa caawin doona inaad la kulanto waqtiyada kama dambaysta ah oo aad qorto waxyaabo tayo sare leh.
Qalabka ku jira casharkaan wuxuu ku siin doonaa fikrado ku saabsan sida loo qoro nuxur ku qanciya isla markaana loo abuuro cinwaanno dilaa ah ololahaaga suuqgeynta waxyaabaha ku saabsan.
Intaas waxaa sii dheer, koorsadu waxay ka kooban tahay 32 cashar, 1 maqaal, iyo 4 qalab la soo degsan karo oo aad ka heli karto wakhti kasta.
Muddada koorsadan waa 1 saac 30 daqiiqo.
9. Istaraatiijiyadda Mawduuca Xirfadlayaasha Takhasuska ee Jaamacadda Woqooyi-Galbeed (Coursera)
Koorsadan qoraalka qoraalka ah waxaa loogu talagalay xirfadlayaal diiradda saaraya abuurista fikradaha bartilmaameedsanaya dhagaystayaasha. Waxaa bixiya Jaamacadda Northwest ee Coursera.
Koorsadu waxay ku bari doontaa farsamooyinka iyo aaladaha loo baahan yahay si loo qoro nuxur ku qanciya oo soo jiidan doona xiisaha dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato.
Waxaad sidoo kale baran doontaa sida loo abuuro nuxurka barnaamijyo kala duwan oo dijitaal ah.
Muddada koorsadu waa 4 bilood.
10. Macluumaadka Suuqgeynta Maskaxda: Abuur Mawduuc iibiya (Udemy)
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ahi ma laha wax shuruudo ah oo lagu soo qoro. Waxay ku bari doontaa sida loo qoro nuqul suuq geyn cad ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad baran doontaa siyaabaha kala duwan ee ku saabsan sida loo wado taraafikada boggaaga adoo adeegsanaya suuq geynta emaylka, hababka ugu fiican ee SEO, curinta ololaha, dhiirrigelinta waxyaabaha, iyo sida loo isticmaalo warbaahinta bulshada si loo abuuro wacyigelin sumadeed.
Macallinka koorsada Brad Merrill waa ganacsade iyo agaasimaha guud ee warbaahinta Merrill. Wuxuu ka caawiyay dhowr shirkadood oo bilow ah isla markaana wuxuu aasaasay shirkado dib u habeyn ku sameynaya istiraatiijiyadooda suuq geynta waxyaabaha ay ka kooban yihiin si ay natiijooyin u helaan.
Muddada koorsadu waa 3 saacadood 30 daqiiqo.
11. Sifaynta qoraalka - Sida loo qoro nuqul iibiya (Udemy)
Sirta nuqul-sameynta ee Udemy ayaa kaa caawin doonta inaad abuurto maqaallo dhiirigelin leh oo iibiya. Koorsadan dhexdeeda, waxaad ku baran doontaa sida loo qoro nuxur soo jiidan doona akhristayaasha oo u rogi doona macaamiisha soo noqonaysa. Waxay sidoo kale ku bari doontaa codka saxda ah ee kugu hagi doona inta aad wax u qoreyso dhagaystayaashaada.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad baran doontaa taatikada si aad u maamusho isgaarsiinta B2B adoo adeegsanaya nuqullo leh wicitaan cad oo ficil ah.
Len Smith waa macalinka koorsadan. Macallinku wuxuu leeyahay in ka badan 20 sano oo khibrad ah xagga qoraalka iyo wuxuu in ka badan 99,000 oo arday ku soo baray farshaxanka qoraalka.
Waxay kugu qaadan doontaa 3 saacadood inaad ku dhammaystirto koorsadan.
12. Koorsooyinka Suuq-geynta Bilaashka ah ee Khadka Tooska ah (Barashada LinkedIn)
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee qoritaanka nuxurka ee iskeed u socotaa waxay diiradda saareysaa warbaahinta bulshada, gelinta, joornaalada, iwm. Waxay ka kooban tahay 59 casharro oo loo qaybiyay talooyin iyo farsamooyin ay weheliso qiimeynno.
Intaas waxaa sii dheer, koorsadu waxay leedahay ikhtiyaar khadka tooska ah iyo khadka tooska ah. Waxaad dooran kartaa inaad ku qaadatid khadka tooska ah ama khadka tooska ah. Waxaad si bilaash ah ugu heli kartaa casharrada fiidiyowga iyo agabyada kale bishii ugu horreysay ee aad iska diiwaangeliso koorsada.
Waad noqon kartaa qoraa nuxur leh ama aad kaga fiicnaan kartaa qoritaanka maaddada marka aad iska diiwaangeliso mid ka mid ah koorsooyinka ugu sarreeya ee bilaashka ah ee khadka tooska ah ee loogu talagalay qorista waxyaabaha aan kuugu hayno qodobkan. Xirfadaha aad ka heli doonto ayaa kaa caawin doona inaad u qorto waxyaabo ku qasbaya ololahaaga suuq-geynta taasoo kuu abuuri doonta beddelaad sare adiga.
Sida loo qoro Qormooyinka ku guuleysta deeqaha waxbarasho
Koorsooyinka Kitaabka Quduuska ah ee Bilaashka ah ee Ardayda
Previous Post:Shuruudaha Universitè de Sherbrooke | Khidmadaha, Barnaamijyada, Kulliyadaha, Darajooyinka
Post Next:9-ka Jaamacadood ee ugu Taajirsan Kanada Hada